Uchungechunge ngegalofu: Imisebenzi etholakala egalofini - Bayede News
Lo mdlalo awuthandwa ngabathile ngenxa yezizathu ezahlukene, ezinye zazo okungaba ukuthi umdlalo wabantu abanemali abangazi ukuthi bazoyenzani noma ukuthi kudlalwa ngento ebalulekile, umhlaba, njengoba udlalwa endaweni enkulu. Okuqaphelekayo kodwa wukuthi umdlalo wegalofu unomthelela omuhle kwezomnotho. Kunemisebenzi eminingi eyakheka ngenxa yokudlalwa kwawo. Eminye itholakala ngqo kanti eminye yakheka engxenye. Abathwali bezikhwama zegalofu Umdlali wegalofu udinga umuntu ozomthwalela isikhwama segalofu noma amdonsele ikalishi. Lokhu kungoba umdlali udinga amandla kanti ukuzithwalela isikhwama noma ukuzidonsela ikalishi kungamthena amandla.
Umthwali wegalofu akagcini ngokuthwala isikhwama kodwa uma bevumelene ngokwemingcele yomsebenzi, unika nezeluleko ngenduku umdlali angayisebenzisa ukudlala ishodi neshodi, aphinde aluleke umdlali ngokuthi angalishayela ngakuphi futhi kangakanani igalofu ukuze lingene emgodini. Kufanele agcine izinduku zokudlala zihlanzekile ukuze kungaphazamiseki ukushaywa kwegalofu nokuthi zingaboliswa ukungcola. Emazingeni ezimfundamakhwela umthwali wesikhwama uthola imali ebekwe yikilabhu. Le mali uyiholelwa emuva komzuliswano onemigodi eli-18, othatha cishe amahora amahlanu ukuqedwa. Emazingeni akhokhelwayo umthwali uthola ingxenye engamaphesenti ali-10 kulokho okusuke kuzuzwe ngumdlali. Isibonelo: uma umdlali ezuze izi-R100 000 umthwali wakhe kufanele amkhokhele izi-R10 000. Lokhu kuvamise ukuthi kwenzeke emuva kwemizuliswano emithathu kuya kwemine (izinsuku ezintathu noma ezine).
Izisebenzi zaseclubhouse Inkundla yegalofu ayiphelele ingenayo indawo lapho abadlali bethenga khona okuya ethunjini, iziphuzo ezibabayo nezingababi, bageze bashintshe futhi ephinde isetshenziselwe ukwethula abaphumelele. Leyo yiclubhouse. Ngeke isebenze le ndawo ngaphandle kwezisebenzi zakhona okungabathungizinkamba (barmen), abasekhishini, abahlanza indawo, oweta nabanye. Abanakekela inkundla Inkundla yegalofu kufanele ihlale isesimweni esihle sokudlala futhi ihehe kwabadlulayo njengoba ingwe idla ngamabala kulo mkhakha. Ukuze kube njalo, kudingeka izisebenzi ezinquma izihlahla, ukusika utshani, ukususa izidindi nokunye. Bonke laba bantu kufanele basebenze ngaphansi kwesandla sesikhulu esibizwa ngegreenkeeper. Ukuze ube yigreenkeeper kufanele uqonde kabanzi ngempilo yotshani, amakhemikhali okubulala izidindi, ukuphatha abantu nokuxhumana nezinhlaka ezahlukene ikakhulukazi ikomidi labadlali.
Abalekelela iphrofeshinali Inkundla nenkundla kufanele ibe nephrofeshinali ebhukha imdlalo, idayise izidingo zokudlala njengezinduku nezingubo iphinde ifundise abafuna ukujoyina lo mdlalo noma labo abakwaziyo ukudlala kodwa abafuna ukulola amakhono abo. Iphrofeshinali liyabadinga abalekeleli ukuze likwazi ukwenza wonke lo msebenzi. Izimboni zegalofu Ziningi izinto ezidingeka egalofini okufuneka zikhiqiziwe. Ngakho-ke kunezimboni zokuqhikiza izinduku zegalofu, amabhola, izingubo zokudlala, izicathulo, izikhwama, ukudla, iziphuzo, izigqoko nokunye.
Ngaleyo ndlela kunamathuba omsebenzi akhekayo. Izinga elikhokhelwayo Konke engikubale ngenhla singakubala nasezingeni elikhokhelwayo kodwa kuleli zinga ubuhle balo mdlalo buyenyukela. Lo mdlalo uxhaswa ngemali eshisiwe okusho ukuthi abadlali abaningi bagcina sebengosomabhizinisi noma abatshalizimali. Futhi kunamathuba omsebenzi atholakala kuleli zinga njengezisebenzi zezindaba, singabala amaphephandaba, imisakazo neziteshi zethelevishini. Uma kunomncintiswano omkhulu kudingeka izisebenzi eziningi njengoba kuba nezibukeli eziningi ezidinga ukudla, iziphuzo izindawo zokulala nezinye izinto zokuzithokozisa njengezizinda zokudlala izingane. Ikhona neminye imisebenzi eyimixhantela njengokuthi labo abasuke beyothathela izindaba zomncintiswano badinga izinto zokuhamba kanye nezindawo zokulala. Kuyacaca ukuthi lo mdlalo othathwa abanye njengento yokutamasa, iwumbele ogwansile ngakwezomnotho.
nguZakhele Nyuswa Feb 14, 2020